I-Australia iya kuvula umda wayo kubahambi abagonywe ngokupheleleyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Australia eziQhekezayo » I-Australia iya kuvula umda wayo kubahambi abagonywe ngokupheleleyo
Airlines • isikhululo • Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuphumla kweAustralia kwezithintelo zohambo kuza ngaphandle kwezixeko zayo ezibini ezikhulu, iMelbourne neSydney, kunye nekomkhulu layo, iCanberra, ishiyekile ngenxa yokunyuka kwamatyala okwenzekile kwezo ndawo zasezidolophini ekuqaleni konyaka.
Ukuphumla kwezithintelo kuya kuvumela abemi ukuba bahambele phesheya xa inqanaba lokugonya kukarhulumente wabo libetha iipesenti ezingama-80
Okwangoku, abantu banako kuphela ukuphuma e-Australia ngezizathu ezizodwa, kubandakanya umsebenzi oyimfuneko okanye ukutyelela ilungu losapho eligulela ukufa.
Ukubuyela e-Australia kungoku kuthintelwe zizabelo ezingqongqo zokufika kwaye abo babuyela kweli lizwe kufuneka benyanzelwe ukuba bodwa iintsuku ezilishumi elinesine.
I-Australia iqale yawuvala umda wayo ngo-Matshi ka-2020, ivala abemi bayo kunye nabahlali ukuba bahambele phesheya ngaphandle kwemvume esemthethweni kwaye beshiya amawaka abantu base-Australia bebambeke phesheya.
Inkulumbuso yase-Australia uScott Morrison
"Lixesha lokubuyisela abantu base-Australia ubomi babo," iNkulumbuso yelizwe uScott Morrison utshilo namhlanje, ebhengeza oko Ostreliya izakuqala ukunciphisa izithintelo eziqatha zomda ebezithathe kwangoko kubhubhane we-COVID-19, ivumela abemi abagonyiweyo ukuba bahambele kumazwe aphesheya.
Ukuncitshiswa kwezithintelo zemida ye-COVID-19 kuya kuvumela abemi base-Australia ukuba batyelele phesheya xa inqanaba lokugonya kukarhulumente wabo libetha i-80% -injongo ezibekiweyo kwilizwe lonke ukuqinisekisa ukuba ukuqhambuka kwentsholongwane akunakuphazamisa indawo zonyango.
okwangoku, ENew South Wales lelona lizwe lisondeleyo kuloo mqobo, lisetelwe ukufikelela kulo kwisithuba seeveki, ngelixa iVictoria kulindeleke ukuba ibe yeyesibini ukuhlangabezana nemfuno.
Ngeli xesha, abantu banako ukuphuma kuphela Ostreliya ngezizathu ezizodwa, kubandakanya umsebenzi oyimfuneko okanye ukutyelela ilungu losapho eligula kakhulu. Ukubuyela e-Australia kuthintelwe zizabelo ezingqongqo zokufika kwaye abo babuyela kweli lizwe kufuneka benyanzelwe ukuba bodwa iintsuku ezilishumi elinesine.
UMorrison ukwathe, kananjalo nokwenza ukuba kube lula ukuba abantu abagonyelweyo bahambe, umlinganiso wokumiswa yedwa ehotele- obiza i-AUS $ 3,000 ($ 2,100) - uyakonzakaliswa kwaye kutshintshwe iintsuku ezisixhenxe zokuvalelwa ekhaya.
Olu phumlo aluzukusebenza kwangoko kubantu abangena kwamanye amazwe, nangona urhulumente wathi uyasebenza ukuqinisekisa ukuba ilizwe kungekudala "liza kwamkela abakhenkethi babuyela kunxweme lwethu."
OstreliyaUkuphumla kukhetho lwezithintelo zokuhamba kuza nezixeko zayo ezibini ezikhulu, iMelbourne kunye neSydney, kunye nekomkhulu layo, iCanberra, ishiyekile ngenxa yokunyuka kwamatyala ezenzekile kwezo ndawo zisezidolophini ekuqaleni konyaka.